कांग्रेस सभापतिमा ६ जनाको उम्मेदवारी – E Kutumba
कांग्रेस सभापतिमा ६ जनाको उम्मेदवारी
By ईकुटुम्ब On Dec 11, 2021 0
मंसिर २५, २०७८ शनिबार ,काठमाण्डाै – नेपाली कांग्रेस सभापति पदमा मुख्य चारसहित ६ जना नेताको उम्मेदवारी परेको छ। काठमाण्डौमा भैरहेको पार्टीको चौधौं महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्वको लागि वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिको उम्मेदवारी परेको हो ।
यस्तै कल्याण गुरुङ र गोरखाका युवराज न्यौपानेले पनि सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका छन्। देउवाले नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूहसँग समीकरण गरेर प्यानलसहित उम्मेदवारी दिनुभएको हो । संस्थापनइतर समूहमा भने सहमति हुन नसकेपछि शेखर कोइराला र प्रकाशमान सिंहको उम्मेदवारी परेको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर बस्नुभएको छ ।
उहाँले कोइराला समूहलाई समर्थन गर्नुभएको छ । संस्थापनइतर समूह विभाजित भएपछि देउवालाई फाइदा हुने भएको छ । तर यसअघि नै देउवा समूहबाट अलग्गिएका विमलेन्द्र निधिले पनि सभापतिमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । उपसभापतिमा देउवा समूहबाट पूर्णबहादुर खड्का र विजय गच्छदार, शेखर कोइराला समूहबाट चन्द्र भण्डारी र धनराज गुरुङ तथा प्रकाशमान सिंह समूहबाट सुजाता कोइरालाले उम्मेदवारी दिनुभएको छ । महामन्त्रीमा प्रकाशमान सिंह समूहबाट विश्वप्रकाश शर्मा, देउवा समूहबाट डा. प्रकाशशरण महत र प्रदीप पौडेल तथा शेखर कोइराला समूहबाट डा. मिनेन्द्र रिजाल र गगन थापाको उम्मेदवारी परेको छ ।
टिकटकमा भाइरल बिहेको जग्गेमा टालो च्यात्ने होडबाजीको सन्देश
कांग्रेस महाधिवेशन : क–कसले लिए उम्मेदवारी फिर्ता ? (नामसहित)